Lee ihe dị iche ọchị na-achị na-eweta! | Martech Zone
Lee ihe dị iche ọchị na-achị na-eweta!
Monday, March 12, 2007 Tuesday, October 4, 2011 Douglas Karr
Oge obula m gbanwere isiokwu blog m, ana m ahapụ ihe osise nke m n'ihu ihu. Oge ọ bụla m hapụrụ ya, ana m enweta ọtụtụ ozi ịntanetị na azịza na-ajụ ebe ọ dị! Agaghị m emehie ihe ahụ ọzọ - ọ na-atọ m ụtọ etu nzaghachi na ụdị mmadụ ọ na-eweta na saịtị ahụ. Anaghị m ekwu okwu ọ bụla, ana m agbasi mgba ike itinye foto m na saịtị ahụ. Agbanyeghị, amaara m nke ọma na o siri ike iwulite mmekọrịta gị na onye ị hụbeghị.
Ọ bụrụ na blọọgụ bụ mkparịta ụka, kedu ka esi esi akparịta ụka gị na onye ị na-apụghị ịhụ anya? Ekwesịrị m ikweta, tupu ịgbakwunye m ịmụmụ ọnụ ọchị na nkụnye eji isi mee, saịtị ahụ amachaghị nke ọma. M na-eche otú mmetụta ịmụmụ ọnụ ọchị ga-esi nwee uto nke blọọgụ ahụ. N'ezie o nwere ụfọdụ mmetụta.
Ejiri ihe ngosi dị n'elu karịa 4 afọ gara aga mgbe m na-arụ ọrụ maka ntụpọ com na Denver, Colorado. M arọ, grayer na softer karịa m bụ na na kemmenyeujo foto. Onye foto ahụ nwere ọtụtụ onyinye! Ọ bụ ogbugba m ga-anọ na saịtị ahụ ruo nwa oge. Ọ gwụla ma m ga-alaghachi n'ụdị (na-abụghị ube). M na-egwu ndị mmadụ ọchị ma ọ bụrụ na m ga-egwu egwuregwu ma ọ bụ gbaa ịnyịnya ígwè iji gbaa laptọọpụ m, m ga-abụ Maazi Eluigwe na Ala. O doro anya na sayensị nwere ike ijide anyị iji nye anyị ụdị ndụ dị mma nke keyboard, pizza na mmemme abalị.
Ka ọ dị ugbu a, m ga-eme ka ọ gbaa agba. Mgbe m zutere gị, ị ga-ahụ otu ọnụ ọchị ebe ahụ - ọ bụ ezie na ihu adịghị mma.
Douglas Karr Monday, March 12, 2007 Tuesday, October 4, 2011
Ihe m na-agụ ugbu a na nyocha nke Wikinomics
Wikinomics: Otu Nkwekọrịta Uzo Ga-agbanwe Azụmaahịa
Mar 12, 2007 na 7: 46 PM
Ekele maka imewe ọhụụ. Ọ dị ezigbo mma, dịkwa ọcha.
(Ma ugbu a njikọ njikọ mgbasa ozi na-aga na peeji ederede dị mfe na-ekwu na ọ ga-emegharị m gaa na peeji ziri ezi. Kama ọ na-agbanyeghachi onwe ya. Nke a ọ bụ nsogbu Mac?)
Mar 12, 2007 na 7: 54 PM
Ofu! Ọ bụ nnọọ kpam kpam egwu redirect koodu nke m dere ma nwalee.
Mar 24, 2007 na 4: 50 PM
Yep. Ugbu a ọ na-arụ ọrụ. Eleghị anya ị chọrọ tinye “ọbụghị” n’ime peeji mmegharị gị direct
Ọ bụrụ na ibe ahụ na-ebu ibu mgbe sekọnd 5 gachara, pịa ebe a.
Mar 24, 2007 na 4: 55 PM
Kedu ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na unu enweghị ya?! Daalụ!
Mar 12, 2007 na 10: 17 PM
ọbụna na aha ịgbanwe gị “Foto muglọ Nga” na-eme ka ọ na-eche dị ka a ala ebe na-abịa.
Mar 12, 2007 na 10: 20 PM
Daalụ, Steven! Nke ahụ bụ n'ezie ihe m na-aga. All na-nnọọ… ma e wezụga ndị pụtara!
Mar 13, 2007 na 9: 09 AM
Doug! Nnukwu ndozi!
M ga-asị 'Okporo mmiri uwe ma laghachi na jovial oyiyi gị nwere tupu', na mgbe ahụ, m chere na nke abụọ… ikekwe abụọ two
Ọ dị mma, anyị chọrọ onye ọzọ ọzọ na uwe na-ekwu maka teknụzụ na ahịa? Ọ BGH ezie, ànyị chọrọ n'ezie ịgụ gbasara teknụzụ na azụmaahịa site na slacker na sweta (ochie eserese)?
Ya mere, gịnị ka anyị ga-eme? Anyị chọrọ nchikota nke eserese mbụ gị na-achị ọchị, na eserese nke abụọ - mana na-enweghị eriri. Dum 'Enyi na Enyi / Funny, non-stuffy, but still professional' lee anya na obi.
Ma hey, ọ bụ oku gị, ma ị ka bụ x1000 nwere obi ike karịa m maka iji isi mee isi gị. (Aga m arapara na isi isi iyi m ambigram ruo mgbe m gafere ha ọzọ…) 😉
Mar 13, 2007 na 10: 55 AM
Ọ dị mma, buru n'uche na nke a sitere n'aka nwoke nwere katuunu nke aka ya na isi ya, mana dịka William, “Doug na-achị ọchị” masịrị m. Ma n'adịghị ka William, Achọrọ m teknụzụ m na azụmaahịa site na slacker na sweta 🙂
Ọ bụ nnukwu foto n'agbanyeghị, na mkpokọta anya dị egwu - dị nkọ, dị ọcha, mana obi ike.
Ọ masịrị m.
Mar 14, 2007 na 6: 27 PM
M na-achị ọchị na foto a! Na-achị ọchị n'ihi na achọrọ m ịmata mmetụ aka ọ ga-eme ka ọ dị m mma.
Mar 13, 2007 na 11: 15 AM
Olu Tony: ọchị ọchị.
My Vote: Na-achị ọchị Doug.
Votu ugbu a! 😉
Tony: Amaara m blog gị nke ọma ugbu a - nke gị bụ nke a na-eme SOAP ka anyị na-ekwu okwu site n’aka Robert Hruzek (middleszonemusings.com)! Banyere ọrụ dị mfe dịka ịme nke a! (kwesịrị ịbụ ọnwa dị mma na ụlọ ọrụ ọgwụgwọ)
Mar 14, 2007 na 4: 58 PM
Enwetara m otu ihe ahụ na foto nwamba m. 🙂
Olee mgbe o ruru ọnọdụ òtù nzuzo?
Mar 14, 2007 na 6: 26 PM
engtech, nke ahụ dị mma!
Enweghị m pusi. Enwere m Jack Russell aha ya bụ Cooper na-achụ nta ma gbuo nwamba ndị ahụ niile. 🙁
Mar 14, 2007 na 7: 05 PM
Okwu a niile nke ihu ọchị na nwamba bịakwutere m n'ihi ya, ekpebiri m ịgbakwunye wijetị wijetị nke WinExtra mascot ihe dị ka ọkara ụzọ ala LOL.